Dowlada Federaalka Soomaaliya oo labo daran mid dooro ay ka soo foodsaartey khilaafka Masar iyo Itoobiya ee biyaha wabiga Niilka Buluuga. – idalenews.com
Dowladda Masar ayaa cirka ku sii shareeraysa khilaafka webiga Niilka kadib markii Dowladda Itoobiya sheegtey in biyaha webiga Niilka Buluugan ay u leexineyso biyo xireenka Afrika ugu weyn ee dhawaan laga hirgeliyey dalka Itoobiya.
Dowladda Itoobiya ayaa iyadu ka aamunsan digniinaha iyo laab-tumashada ay waddo Xukuumadda Maxamed Mursi ee Xisbiga Ikhwaanul-Muslimiinka, waxaana marar badan ay sheegtey in biyo xireenku aanu waxba u dhimeyn dhaqaalaha dalka Masar.
Biyo xireenka Millennium Dam ee Itoobiya laga hirgeliyey waxaa taageersan oo doonaya in ay ka faa’iidaan dalalka gobolka dhaca Sida Uganda, Suudaanta Koonfureed iyo Kenya.
Madaxweynaha dalka Uganda ayaa digniin culus u direy dalka Masar waxaana uu uga digey in aysan dib u soo celin khaladaadkii hore ee ay galeen xukuumadihii hore, ee ahayd in ay webiga Niilka dadka ugu hanjabaan. Dalka Uganda waxa uu ka mid yahay dalalka uu maro Webiga Niilku
Museveni ayaa Arbacadii baarlamaanka dalka Uganda u sheegay in dhismaha Biyo xireenka ee Itoobiya aanu waxba ka baddalayn qoondadii dalka Masar ka heli jirey biyahaas. Madaxweynaha Uganda ayaa sheegaya in dhismaha Biyo xireenkan uu yahay mid kor u qaadaya dhaqaalaha gobolka.
Inkasta oo dalalka deriska la ah Itoobiya ay si weyn u taageersan yihiin dhismaha biyo xireenkan ayaa Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku tiirsan ciidamada Midowga Africa ee Uganda u horeyso iyo kaalmada caalamiga ah, looga gacan haadiyey dalka Masar, waxaana looga shakisan yahay in ay dib u soo nooleynayaan dagaalkii wakiilashada ahaa “Proxy War”, kadib Markii saraakiil sar-sare oo Masar ka socota ay yimaadeen Muqdisho, isla markaana dowladda la soo gaarsiiyey dhawr shixnadood oo hub ah kaas oo Masar ugu deeqday Dowladda federaalka ah, Hubkaas oo qaar kamid ah lagu arkey magaalada Kismaayo loona isticmaaley dagaalkii ka dhacay halkaas.
Madaxweyne Xassan Shiikh oo aan ka fiirsan cawaaqib xumada ay keeni karto tallaabooyinka uu qaadayo ayaa durba isku dayey in uu dhayo dhaawacyada ka dhashey tallaabooyinka qar iska tuurnimada ahayd ee Dowladiisu si fudud ku dhexgashey khilaafka Niilka.
Wasiirka Madaxtooyada Faarax Shikh Cabduklqaadir ayuu Madaxweynuhu u direy Adis Ababa isaga oo fariin ka sida Madaxweynaha, waxaana laa aaminsan yahay in fariintaasi la xiriirto xiriirka cusub ee Masar iyo Soomaaliya gaar ahaan dhanka Milteriga iyo shakiga laga qaadey.
Madaxweeyne Xassan Shiikh ayaa la sheegayaa in uu wefdi kale u direy dalka Masar, Waxaana wefdigaas ka mid ah Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamed Cali Ameeriko oo ah Diblomaasi ku dhaw Madaxweyne Xassan Shiikh, wefdigan ayaa la sheegayaa in ay dalka Masar kala hadlaayaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga dhanka Milteri taas oo dalka Masar ballan qaadey in uu gacan ka geysto dhismaha ciidanka Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Webiga Niilka Buluugan ayaa ka soo burqada dalka Itoobiya waxaana uu maraa dalalka Uganda, Suudaanta Koonfureed, Suudaan iyo Masar, heshiis la kala saxiixdey xiligii gumeystaha 1929 ayaa dhigaya in dalka Masar oo ahaa dalka ugu dadka badan xiligaas in uu helo inta ugu badan ee biyahaas ama ay isticmaalaan.
Labada webi ee Soomaaliya mara ee Jubba iyo Shabelle waxa ay ka soo bilowdaan dalka Itoobiya.
Khilaafka Webiga Niilka ayaa ah mid muddo soo taxnaa, waxaana dalka Masar Itoobiya u isticmaali jirtey dagaalo wakiilasho ah iyada oo ku hubeyn jirtey Jamhado ama dalalka dersika ah, Waxaana dadku is weydiinayaa nikaaxan cusub ee dhexmaray Madaxweyne Xassan Shiikh iyo Xukuumadda Masar halka uu salka dhigan doono iyada oo Dowladda Soomaaliya baahida ay u qabta dalalka jaarka ah uu yahay mid ka weyn tan ay u qabto dalka Masar.
Dowlada Iiraan oo yeelatay Madaxweyne Cusub